Fonosana trondro ao an-trano
Noho izany dia irinao indraindray manome zavatra mahavariana sy mamy ny zanakao, fa miaraka amin'izay ihany koa ilaina. Milaza ianao fa tsy misy izany vokatra izany! Ary tsy marina izany. Manolotra anao fomba tsotra entina hanamboarana voankazo ao an-trano ianao . Izany fahafoizan-tena izany dia azo antoka fa ho an'ny fanandraman'ny zanakao, ary hitondra fifaliana ho anao izahay.
Ny fanaka amin'ny pastille
voankazo voajanahary (voatokana) - 1 kg;
drano voatsabo - 0,5 singa;
siramamy maitso - hanandrana;
asidra citrique - manify.
Eritrereto ny fomba tsotra ahafahana manamboara siramamy. Noho izany, makà voankazo faran'izay tsara ao an-tranonao. Mandroaka azy ireo isika, manosotra azy amin'ny menaka, manala azy ireo, raha ilaina, ary manaikitra azy ireo amin'ny tanana tsara, na mandalo azy ireo amin'ny alalan'ny mofomamy. Nataonay tao anaty boivoy iray ny ovy, ary asio ranom-boasary ary atsipazo eo amin'ny fatana, eo amin'ny afon-dasy. Atsofohy mandritra ny 15 minina ny voankazo, mampihetsi-po foana mba tsy handoro ny tendrony. Amin'ny faran'ny fikarakarana dia manampy siramamy ny manandrana, avelao atelina 1 minitra, ary esory ny voankazo avy eo amin'ny afo ary avelao izy hamafa tanteraka.
Manaova plastika na metaly volom-borona, manarona azy amin'ny polyethylene ary manaparitaka masomboly marevaka miendrika iray miendrika 0.5 santimetatra eo ho eo. Nataonay tany maina nandritra ny telo andro ilay sakafo matsiro. Avy eo ny voa namboarina voa maina dia nalalaka avy amin'ny polyethylene, raha maina araka ny tokony ho izy, avy eo dia ho mora ny manao, ary manapaka izany ho ampahany kely amin'ny 15 * 15 lehibe.
Manidina ny sombin-tavoahangy tsirairay isika ary mametraka izany anaty siny madio. Voasakantsika ny kapaola amin'ny kapa misy kapaola na mahazatra. Izay ihany, vonona ny sakafo matsiro sy mahasoa.
Ho an'ireo mpankafy an'ity tsindrin-tsakafo ity dia manolotra ny pasta vita amin'ny pears isika , izay azo antoka fa mifanaraka amin'ny fisotro misy dite miaraka amin'ny fianakaviana.
Apetaka maina - fitaterana
Ahi-komana goavam-be nasiana siramamy
Salo ao anaty salohy - recipe tena tsara
Ahoana ny fomba fanalefahana ny doka Boligara amin'ny ririnina?
Salady atody ao an-trano
Kiraly amin'ny teny Koreana - recipe
Ny pastôraly ho an'ny ririnina - ny fomba niavaka indrindra tamin'ny fijinjana ny pastèque
Ahoana no hankalaza ny zazalahy teraka 2 taona?
Fitafiana ho an'ny vehivavy bevohoka amin'ny fararano
Ahoana ny fomba hahazoanao visa Schengen?
Pork miaraka amin'ny holatra ao anaty lafaoro
Ahoana no hanaisotra ny matavy amin'ny vavoninao?
Ny vokatry ny alikaola ao amin'ny atidoha
Manamarina i Mariah Carey sy James Packer fa manao tsara izy ireo, ao anatin'ny tsaho momba ny fidoboky ny fifandraisan'izy ireo
Inona no manonofy zazalahy vao teraka?
Antalipily folakala - inona io?
Aretina mandritra ny fitondrana vohoka
Ireo tontolo paralèl dia porofon'ny fisiana, firy ny tontolo paralèl misy?
American Bulldog - famaritana breeding, karazana fiahiana
Oliva menaka ho an'ny fahavoazana
Chlamydia trachomatis amin'ny vehivavy
Ahoana no fomba hahatonga anao ho mpitoraka bilaogy mahomby?
Fihodina felana avy any Pavlov Posad